मनोरञ्जन – Jana Prashasan
आज विश्व सङ्गीत दिवस स् ‘योग र सङ्गीतको सङ्गम’ नाराकासाथ मनाइँदै
काठमाडौं : आज विश्व सङ्गीत दिवस मनाइँदै छ । सङ्गीतका पारखीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँदैछन् । यस वर्षको विश्व सङ्गीत दिवसको नारा ‘योग र सङ्गीतको सङ्गम’ रहेको छ । सङ्गीतलाई गायन, वादन र...
मिस नेपालको ताज प्रियंका रानी जोशीलाई
काठमाडौं : मिस नेपाल–२०२२ को ताज प्रियंका रानी जोशीले जितेकी छिन् । आज काठमाडौंमा भएको फाइनलमा २३ जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै जोशीले मिस नेपालको ताज जितेकी हुन्। उनलाई पूर्व मिस नेपाल नम्रता जोशीले ताज...
Krishna Dharabasi has written the heart touching famous Nepali Novel Jhola. Jhola can be considered as the story rather than the novel. Jhola is all about the eternal connection of love between mother and...
नायिक बर्षा राउत र संयोग कोईरालाको औंठी साटियो
काठमाडौं । नायिका वर्षा राउत र प्रेमी संजोग कोइरालाले इन्गेजमेन्ट गरेका छन्। सात वर्षदेखि प्रेमसम्बन्धमा रहेका वर्षा र संजोगले यहि फागुन २ गते विवाह बन्धनमा बाँधिदैछन्।
मन्त्रालयको चौमासिक समीक्षा बैठक चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्षद्वारा बहिष्कार
काठमाडौं । मन्त्रालयमा आईतवार बोलाइएको चौमासिक समीक्षा बैठक चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले बहिष्कार गरेकीछन् । खवर गर्दागर्दै पनि अटेर गरी अनुपस्थित भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चलचित्र बिकास बोर्ड्की...
काठमाडौं । चर्चित कलाकार बीएस राणाको उपचारको क्रममा काठमाण्डौको टिचिङ अस्पतालमा निधन भएको छ । राणाको केही समयदेखि बिरामी थिए । राणाको ७८ बर्षको उमेरमा निधन भएको हो । उपचारको क्रममा उनको मुटुमा पनि...